အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ပျော်ပျော်ပါးပါး ဟင်းချက်စားမယ်..
21 Responses to “ပျော်ပျော်ပါးပါး ဟင်းချက်စားမယ်..”
ချောတစ်ယောက် ဒီရက်ပိုင်း ဟာသတွေတော်တော်လုပ်နေတယ်နော်။
တိုက်စရာရှားလို့ ခြေသည်းစွတ်ပြုတ်ကြီးလာတိုက်တယ်။ မကျေနပ်ဘူးဟေ့။ (နော်..မကေ)။ အရေခွံလေးလောက်ဆို ဟုတ်တုတ်တုတ်။
ဟေ့ဟေ့...အရေခွံကို လာမလုနဲ့ကွ။ မထိနဲ့နော်။
မလေးရှားလို ပူအိုက်နေတဲ့ တိုင်းပြည်မို့လို့ သူက ဝက်ဝံအရေခွံကို ခြုံခိုင်းတာ..
စေတနာနဲ့ပေးတော့လည်း အသာယူပြီး အပေါင်ဆိုင် လစ်ရမှာပဲ။
ဒါထက် ဖက်ဖယ်ရွက် ဆိုလို့ ငလုံးလက်ဖယ်ရဲ့ အရွက်မှတ်နေတာ။ ( သိမှ သိပဲနဲ့ )
လုပ်စားမယ်ဗျာ..။ ပျင်းတော့ အပျင်းသား။
ငါးခေါင်းဟင်း ဆို သိပ်ကြိုက် ၊ ကြက်သား တုန်ရမ်းဆိုလည်း ကြိုက် ၊
သြော်..ဟီး..ငါ မကြိုက်တာ ဘာများရှိလို့လဲ.အဟီး။
အတော်ပဲ အမြည်းမရှိတာနဲ့ ... ကျေးဂျူးးးးးးကြီးပဲ :-)
ဟယ်...ဝက်ဝံဆီ...လာလေရော့...လိမ်းရော့ လ ဟယ်...., ဟမ်...!!! ဆံပင်တွေ နက်မလာပဲ...ဂတုံးပြောင် သွားပါရောလား....အီး...အီး...:(
လကုန်ခါနီးကြီး အမြည်းလုပ်ဖို့ ခြေထောက်လာပေးနေသေးဒယ်....း)
(ထမင်းမစားရသေးခင် ဟင်းတွေကြည့်ပြီး...ဗိုက်ဆာသွားပြီဗျ...၊ တော်ပြီ ကြက်ဥကြော်နဲ့ပဲ သွားဆွဲတော့မည်...း))
လုဆယ်ယောက်ကျော်ကို ခြေထောက်က နှစ်ချောင်းတည်းလား
အင်း....အမြည်းဆိုတော့လည်း ကျေးဇုးပါ ခိခိ
ချောရေ... စားချင်တာဟယ် ... နှင်းကိုအပြင်မှာတွေ့ရင် ဂယ်ချက်ကျွေးရမှာနော် ...။
ချောပေးလိုက်တဲ့ ၀က်ဝံဆီလေး ယူသွားပီနော်း))
ဟင့်...နောက်ကျသွားပြီ။ ကျန်သေးရဲ့လား....ညလေးဖို့သပ်သပ်ချန်ထားရဲ့လား???? အတော်ပဲ ဆံပင်ကို ဒူးခေါင်းလောက်အထိထားမလို့စိတ်ကူးနေတာနဲ့ ယူသွားပြီ အကုန်လုံး....ဒါဘဲ
အမရေ တစ်ခုပဲဗျာ......... အနော်ကမသောက်တတ်တော့ခက်တယ်ဗျ....... အမြည်းပဲထိုင်စားနေရတယ်.... ကိုဇာဏီကြီးတို့များ တားကိုပြောကြတယ်....... အရက်မတောက်တတ်လို့ အီခြောက်တဲ့......... အဟင့် တားက မတောက်ချင်လို့နေနေတာကိုး (ဟီးဟီး........ ၀င်ကြေညာတာ အရက်မသောက်တတ်ကြောင်း)
အမရေ ဗိုက်ကိုဆာသွားရောပဲ......... ထမင်းမစားရသေးပဲ ဖတ်လိုက်မိတာ............
နတ်သမီးက ခြေ၄ချောင်း မစားဘူးလေ...
ကြက်သားဟင်းတော့ ဘယ်လိုပုံစံပဲလာလာ ကြိုက်တယ်...
သတိတရနဲ့ ၀က်ဝံဆီပေးတာ အရမ်းကျေးဇူးတင်တာပဲ။ ဆံပင်ကောင်းတယ်ဆိုလို့ ပိုဝမ်းသာသွားတယ်...။ ကြက်သား ကချင်ချက် ကို စားချင်လိုက်တာ သရေကျနေပြီ။ သဒ္ဓါက ချဉ်ချဉ်စက်စက်ဆို အရမ်းကြိုက်တယ်.ဘယ်တော့ ချက်ကျွေးမလဲ မျှော်နေမယ်နော်။
မချောရေ မချော အတွက် ဘာမှမကျန်တော့ဘူးဆိုတော့ မကေနဲ့ မမြသွေးနီဆီက ၀က်ဝံ ခြေသည်း စွပ်ပြုတ် လေးကိုပဲ မျှသောက်ကြတာပေါ့နော်။ ချစ်ချစ်ခင်ခင်ပေါ့
၀က်ဝံခြေထောက် နဲ့ လကစွပ်ပြုတ် သောက်ပြီး တော်တော် အီသွားတယ်
နောက်ဆို အကောင်ကြီးကြီး ဖမ်းပေးပါ...း )
အခုမှ ရောက်လာမှတော့ ဘာမှ ကျန်မယ်တောင် မထင်တော့ဘူး ။
ဖွက်ထားတဲ့ဟင်းရော မရှိတော့ဘူးပေါ့ ...။
အဲ့။ ကြက်သားကချင်ချက်လောက်ကတော့ ကျွန်တော်လည်းရတာပေါ့။ ဖက်ဖယ်ကဒီမှာ မရှိဘူး။ ပင်စိမ်းများများထည့်လိုက်ရင်လဲ အလုပ်ဖြစ်တယ်။ :-)
[...] ကြက်သားကချင်ချက် [...]
ဖယ်ဖယ်ရွက် ဆိုတာ ရှမ်းလို " ဖတ်ခွိုင်း " လေ ။ ဗီယက်နမ်တွေ ကမ္ဘောဒီးယားတွေ တောင်စားရင်ဖြင့် ယိုးဒယား မှာလည်း စားကြမယ်ထင်ပါတယ် ။
ဟင်းချက်နည်းတွေ ကြည့်ပြီး သေချာချက်စားမယ်.....
ကြက်ကချင်ချက် ချက်စားကြည့်တာ အရမ်းကောင်းတယ် နောက်ထပ်တင်ပေးပါဦး